'भुइँचालोको सबाई' लिएर नारायण नेपाल
काठमाडौँ । २०७२ सालमा गएको ‘गोरखा भूकम्प’ले मुलुुकलाई ठूलो क्षति पु¥यायो । कयौं मानिसको मृत्यु भयो । भौतिक संरचनाको उत्तिकै विनाश भयो । भूकम्प गएर ४ वर्ष बुधबार पुगेको छ । २०७२ साल वैशाख १२ गते मध्यान्हमा गएको भूकम्पलाई कसैले विर्सन सक्दैनन् ।
भूकम्पको विषयवस्तुलाई आधार बनाएर थुप्रै पुस्तक प्रकाशित गरिएका छन् । कतिपय प्रकाशित हुन बाँकी नै छन् । विषय एउटै भए पनि फरक–फरक कोणबाट लेखिएको पाइन्छ । कविता, कथा, अनुभूति, उपन्यास, नाटक, सवाई साहित्यका विविध विधा समेटिएका छन् भूकम्पको विषयवस्तुमा ।
यसैबिच साहित्यकार नारायण नेपालले भने सवाई लेखेका छन् । सबाई साहित्यको लोककाव्य विधा हो । नेपालले यस विधाको सिद्धान्तसहित यस कृतिको दोश्रो अङ्क ल्याएका हुन् । स्थान, सन्दर्भ, प्रकृति, रचना कौशल तथा भाषिक ज्ञान आदि कुराले सबाईको प्रकृति फरक पार्छ । ५० पेजको लघु कृतिमार्फत् भूकम्पका बेला भएको मानवीय तथा अन्य घटनाको विस्तार साहित्यकार नेपालले गरेका छन् । नव पुस्तालाई यो इतिहासको शिक्षा हुन्छ । साहित्यकार नेपालले उक्त लघु कृतिलाई ‘भुइँचालोको सबाई’ नाम राखेका छन् । कृतिलाई शब्दार्थ प्रकाशनले बजारमा ल्याएको हो ।
कृतिमा समाविष्ट केही सबाई
सुन्नुहोला, मान्य-जन, सबै दाजु-भाइ,
दिदी-बैनी, भन्दैछु म, भैँचाले सबाई !
वायुदोष, ज्वालामुखी, चट्टानको माल,
धरागर्भ चल्दा हुने कम्प भुइँचाल ।
कुनै कम्प ठुलो हुँदा दिन्छ परकम्प,
मुख्य कम्पभन्दा सधैं जो हुन्छ त्यो मन्द ।
हेक्का राखे त्यो घट्दै जानेछ,
डर्नु हुन्न, डरैले लानेछ !
( लहै फरि आए जस्तो छ,
यो भैंचालो कस्तो छ कस्तो !)
प्रकाशित ११ बैशाख २0७५ , मङ्गलबार | 2018-04-24 05:48:39